Huawei P Smart 2019: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite | Gam akporosis
Huawei P Smart 2019: Uzo ohuru ohuru nke ika ahu
Edere Ferreno | | Huawei, Mobiles
Izu ole na ole gara aga, nkọwa nke ekwentị Huawei ọhụrụ malitere ịba. Anyị na-ezo aka Huawei P Smart 2019, nke gini nkọwa na-abịakwute anyị ka izu na-aga. N'ikpeazụ, e gosipụtara ọkwa ọhụrụ nke adịgboroja nke ndị na-emepụta China. Ya mere, anyị maara nkọwa ya zuru ezu.
Huawei P Smart 2019 a gosipụtara dị ka ekwentị nke na-echebara ọnọdụ ahịa echiche. Ọ rutere oke n'etiti etiti, ngalaba na-eto eto nke egosiri dị ka ezigbo uzo ozo di elu, na mgbakwunye na ịme ngosipụta nke ugbu a na ọkwa ya n'ụdị mmiri mmiri.
Na teknụzụ, ọ bụ ihe nlereanya zuru oke na-ezute ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na nso ya taa. Ezi ụdịdị, nke ga-emeri ndị ọrụ. Na mgbakwunye, dị ka ọ dị na mbụ maka ika ahụ, anyị nwekwara ike ịtụ anya ọnụahịa ire ere dị mma.
1 Nkọwapụta Huawei P Smart 2019
Nkọwapụta Huawei P Smart 2019
Huawei P Smart 2019 biara na Kirin 710 dika onye nhazi ya. Ọ bụghị ihe ijuanya, n'ihi na ọ bụ ihe nhazi nke ndị njem China mepụtara maka akụkụ a nke kachasị dị n'etiti. Yabụ ịrụ ọrụ dị mma nke ekwentị na-atụ anya n'akụkụ a. Nkọwapụta ngwaọrụ zuru ezu dị ka ndị a:
Ihuenyo: 6,21 sentimita asatọ na Full HD + mkpebi na 19,5: 9 ruru
Ihe nhazi: Kirin 710 octa-core clocked na ihe ruru 2.2 GHz
Esịtidem nchekwa: 64 BG (Gbasaa na microSD kaadị ruo 512 GB)
Igwefoto na-aga n'ihu: 13 + 2 MP nwere oghere f / 1.8
Igwe n'ihu: 8 MP nwere oghere f / 2.0
Njikọ: 4G / LTE, Bluetooth, WiFi 802.11a / b / g / n / ac, FM redio, 3.5 mm jackphone isi, microUSB
ndị ọzọ: Nweta mkpịsị aka ihe ntanetị
Batrị: 3400 mAh
Akụkụ: 155.2 x 73.4 x 8 mm.
Sistemụ arụmọrụ: Achịcha 9 9 na EMUI XNUMX dị ka akwa nhazi
Agba: Midnight Black na Aurora Blue (Twilight)
Huawei ejiribeghị ụdị a were ọtụtụ ihe egwu. Chinesedị ndị China ewerewo ihe dị n'ahịa taa ma jisie ike ịmepụta ihe nlereanya nke ga-ezute ma ga-amasị ndị na-azụ ahịa. Huawei P Smart 2019 na-esonye na ejiji nke ọkwa n'ọdịdị mmiri mmiri. Ọ bụ otu n'ime ọnọdụ ahịa na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, nke yiri ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'etiti ndị ahịa na gam akporo.
N'ihe banyere nkọwa, ọ karịrị karịa ihe anyị na-ahụ na mpaghara ahịa a taa. Nnukwu ihuenyo, na ezi mkpebi. Ọzọkwa a processor ga-enye ezi arụmọrụ na igwefoto abuo, na ọnụnọ nke ọgụgụ isi iji nye ndị ọrụ ọtụtụ ụdị foto.
Batrị ekwentị bụ 3.400 mAh. Enweghị ihe ekwuru banyere ịgba ụgwọ ngwa ngwa na ekwentị, yabụ na ọ naghị adị ka ị ga-enweta ya. Na mgbakwunye na nhazi ahụ, ọ kwesịrị inye ndị ọrụ nnwere onwe zuru oke. Na mgbakwunye, Huawei P Smart 2019 a na-abịa na gam akporo achịcha. Ezigbo ozi ọma maka ndị ọrụ, na mgbakwunye ịnwe ike inye ụdị nsụgharị sistemụ arụmọrụ na ahịa.
Ekwenti emeela ka ekpughere ya na China. Ọ bụ ezie na, n'adịghị ka ihe ngosi ndị ọzọ nke ụdị a, ugbu a anyị nwere data na ụbọchị mmalite ya na Europe. Ebe ọ bụ na akara ndị China ga-ebido ekwentị na ahịa niile ha nwere ugbu a. Anyị agaghị echekwa ogologo oge.
A ga-ewepụta Huawei P Smart 2019 na Jenụwarị 15. Ọ ga-abịa na agba abụọ, dịka anyị kwurula, nke bụ Aurora Blue na Midnight Black. O yighị ka a ga-enwe ọtụtụ agba n'oge a. Ọzọkwa, a na-ahapụ ya na otu njikọta nke RAM na nchekwa dị n'ime.
Huawei P Smart 2019 ga-akụ ụlọ ahịa na ọnụahịa nke euro 249. Ya mere, e gosipụtara ya dị ka onye ọzọ nwere ọnụahịa dị mma maka akụkụ a. Kedu ihe ị chere maka ụdị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei P Smart 2019: Uzo ohuru ohuru nke ika ahu
Ihe ngosi 9 Galaxy Note ga-enweta A gam akporo n'etiti ọnwa Jenụwarị
Google kwenyesiri ike na ọ nweghị mgbanwe na iwu melite gam akporo Otu